दशै‌को बेला छोरा जे’ल परेपछि, तनाबमा छन् शाहरुख ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारदशै‌को बेला छोरा जे’ल परेपछि, तनाबमा छन् शाहरुख !
दशै‌को बेला छोरा जे’ल परेपछि, तनाबमा छन् शाहरुख !
आर्यन खान बलिउडका सबैभन्दा ठूला स्टार शाहरुख खानका जेठा छोरा हुन्। उनी बलिउड उद्योगको लोकप्रिय स्टार बच्चाहरु मा आउँछ। जे होस्, आर्यन खान लाइमलाइट मा रुचि राख्दैनन् र पापाराजी को लागी पोज गर्न मन पराउँदैनन्।